यी चार राशी भएका पुरुषहरुले श्रीमतीलाई अत्यन्तै माया गर्छन्, कतै तपाइको राशी त परेन ? – rastriyakhabar.com
यी चार राशी भएका पुरुषहरुले श्रीमतीलाई अत्यन्तै माया गर्छन्, कतै तपाइको राशी त परेन ?
कसको चाहाना हुँदैन श्रीमान् श्रीमती सधै हांसी खुशी बाँचौ । तर कसैको त्यो चाहनामा कहिलेकाँही ठेस लाग्छ, कसैको भने पुरा हुन्छ ।
कोहि पुरुष आफ्नो श्रीमतीको इच्छा चाहनाको ख्यालै नगर्ने स्वार्थी हुन्छन् भने कोहि पुरुष आफ्नो श्रीमतीलाई सुखी र खुशी राख्न कुनै कसुर बाँकी राख्दैनन् ।
कुन-कुन राशि भएका पुरुषहरु त्यस्ता हुन्छन त, ज्योतिष शास्त्र यसो भन्छ –
वृश्चिक राशी : यो राशी भएको पुरुष सबैको प्यारो हुने गर्छन् । आफ्नो जिम्मेवारी प्रति बफादार हुने भएकाले परिवारको मात्र नभएर समाज प्रति पनि निकै जिम्मेवारी रही हेरचाह गर्ने गर्छन् । सामाजिक काममा सधै व्यस्त रहने भएकाले यो राशी भएका व्यक्ति मान सम्मान पाउने गर्छन् । परिवारको प्यारो मान्छे पत्नीहरुको प्रेममा पागल हुने गर्छन् भने एकअर्कालाई राम्रो सँग बुझेको हुन्छन् त्यसकारण उनीहरुले सखी जीवन बिताएका हुन्छन् । साभार -अनलाईन खबर
मङ्लबार, कार्तिक २०, २०७५ मा प्रकाशित